Tsiahin’ilay Lehilahy Eritreana Ambavahoanan’ny Fahafatesana Raha Namakivaky ny Ranomasina Mediteranea · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Avrily 2015 15:43 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Français, Español, Ελληνικά, English
Olona namonjy ny fihaonana tao amin'ny Piazza Montecitorio tao Roma taorian'ny naharendrika ny sambo iray niteraka fahafatesan'olona mpifindramonina anjatony, miantso fanovana amin'ny politikam-pifindramonina sy ny zo halalaka mivazivezy tao Eoropa. Photo by Stefano Montesi. Fizaka-manana Demotix
Ity lahatsoratra sy tatitra amin'ny onjam-peo avy amin'i Nina Porzucki hoan'ny The World ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 21 Aprily 2015, ary navoaka indray ato amin'ny Global Voices noho ny fifanekena fizarana votoaty.
Mpifindra-monina tsy voasoratra anarana maherin'ny 800 no namoy ny ainy tamin'ny Alahady 19 Aprily rehefa nivadika nandritra ny dia andrana niainga tao Libya hihazo an'i Italia ny sambo nitondra azy ireo. Nanjary lasibatra farany amin'ny fanondranana olona tsy mitsaha-mitombo amin'ny famakivakiana an'i Mediteranea izy ireo, izay efa namono olona maherin'ny 500 hatramin'ny niandohan'ny taona.
Syriana mandositra ny herisetran'ny ady an-trano ao amin'ny firenena ny ankamaroan'ireo mpifindra-monina. Saingy nilaza ny Vaomiera Ambonin'ny Firenena Mikambana ho an'ny Mpitsoa-ponenana fa Eritreana avokoa ireo vondrona mpifindra monina faharoa lehibe indrindra.
Nandao ny firenena mba handositra ny fanompoam-pirenena ara-miaramila tsy maintsy atao i Habtey; Voantso hanao fanompoam-pirenena amin'ny fotoana tsy voafaritra ireo lehilahy Eritreana izay antsoin'i Habtey ho endrika vaovaon'ny fanandevozana. “Nisy namako iray, fa efa efa ho 20 taona izay no nanompo ny governemanta. Lasa andevo izy, “hoy izy.
Nandositra tao amin'ny lakazerin'ny toby fiofanan'ny miaramila i Habtey ary nandeha tongotra telo andro tao Sodàna mpifanolo-bodirindrina, ka tafaray indray tamin'ny vadiny sy ny zanany vao enimbolana. Niara-niampita ny tany efitra Sahara tao anatin'ny fiara Toyota Hi-Lux izy ireo. Tsy irery izy tao anatin'izany kamiaonety izany: Maherin'ny 30 ny olona nifangongo niaraka taminy tao, ary 15 andro no nanaovana ny dia tao Libya.
Sarotra ny hifaranan'ny loza. Namakivaky ny Ranomasina Mediteranea niaraka tamin'ny olona 80 hafa i Habtey tao anaty sambo kely ahafahan'ny tanany milalao rano. “Tsy misy mihitsy ny endrim-piarovana tamin'izany,” hoy izy nahatsiaro. “Tsy misy jiro, tsy misy tondroavaratra. Lehilahy Ejiptiana no kapiteny tamin'izany ary hoy izy taminay ‘Tsy fantatro izay alehako ary lany ny solika, ka mila mivazavaza sy miantsoantso vonjy isika.”
Indroa nifanena tamina sambo lehibe ny sambo keliny: “Tahaka ny tanàna tsara tarehy izy ireo, ny fahazavana sy ny zava-drehetra,” hoy i Habtey. “Nikiakiaka hoe: ‘Maninona raha mangata-bonjy isika?’ Tsy nisy ny famonjena. Very fanantenana ny rehetra tamin'izany fotoana izany. “
Niaiky i Habtey fa nieritreritra ihany koa izy hoe eo ambavahoanan'ny fahafatesana. Avy eo nisy zava-nitranga tsy nampoizina nitondra fanantenana: raha mbola tany an-dranomasina, nihetsi-jaza ny vehivavy bevohoka iray. Nantsoina ho ao amin'ny efitry ny milina ao anatin'ny sambo i Habtey mba hampiteraka azy satria efa nanana traikefa niasa tamin'ny hopitaly tao Eritrea izy.
“Nanome zazalahy kely ho anay i Andriamanitra,” hoy izy, mahatsiaro ny hafatra nataony hoan'ireo mpandeha namany: “Andeha hifaly fotsiny, aoka hisy ny [fanantenana.] Enga anie mba ho famantarana izao.”
Ora vitsy taty aoriana, niantsona tao Italia, ao amin'ny nosy Lampedusa ny sambony
Pasitera ao avaratr'i Angletera i Habtey ankehitriny. Nanontanianay izy raha mbola te-hanohy ny dia indray, naka aina ela ela izy ary namaly hoe:
“Izany hoe, raha mahita ny zava-niainako aho ankehitriny aho,” hoy izy niaiky, “dia tsy te(hamerina)”